ဘူးသီးတောင်က ဒုရဲအုပ် အပါအဝင် လူတချို့ကို အေအေက ကျ...
22 ธ.ค. 2561 - 14:54 น.
တစ်ဦးချင်စီကိုလိပ်မူပြီး AA ကပေးပို့လာတဲ့ စာထဲမှာ ရခိုင်အမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်(ULA) /ရခိုင့်တပ်မတော် (AA) ရဲ့ ရခိုင်ပြည်အတွင်း အမျိုးသားရေးလုပ်ငန်း တာဝန်တွေနဲ့ ULA ဘက်က ချမှတ်ထားတဲ့ လမ်းစဉ် တွေကို အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နေကြသူတွေကို တစ်စုံတစ်ရာအနှောင့် အယှက် မပေးဖို့ အထူးသတိပေးလိုတယ်လို့ ရေးသားထားပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အနှောင့်အယှက်ပေးသူတွေကိုလည်း ဘယ်သူ့ ကိုမဆို တိကျပြတ်သားစွာ လက်တုံ့ ပြန်သွားမယ်လို့ သတိပေးရေးသားထားတာ ကိုတွေ့ရပါတယ်။
"မြန်မာ့တပ်မတော်နဲ့ ရခိုင့်တပ်မတော်နဲ့ ထိပ်တိုက်တွေ့နေတဲ့နေရာမှာ အစိုးရထန်ထမ်းတွေ အထူးသဖြင့် ရဲတွေ၊ လဝကတွေ ဝင်မပါစေချင်ဘူး၊ ဥပမာ တပ်ဖွဲ့တွေ ပြောင်းတဲ့အခါမှာ ရဲယူနီဖောင်းတွေဝတ်ပြီးတော့ ရဲကားတွေကို အသုံးပြုပြီးတော့ပြောင်းနေတာတွေရှိတယ်၊ တိုက်ပွဲဧရိယာထဲမှာလည်း ရဲတွေကိုခေါ်လာပြီး ရွာသားတွေကို နှိပ်စက်အနိုင်ကျင့်တာမျိုးလည်းရှိတယ်။ အထူးသဖြင့် ပြည်သူကိုဖိနှိပ်တဲ့နေရာမှာ ရဲတွေကို အသုံးပြုလာတာတွေရှိတယ်၊ အဲဒါကြောင့်သူတို့ကို ပြင်းပြင်းထန်ထန်သတိပေးရတာဖြစ်တယ်'' လို့ ခိုင်သုခကပြောပါတယ်။
ဒီဇင်ဘာ ၂၁ ရက်နေ့ ရက်စွဲနဲ့ လိပ်မူပြီး ရခိုင်တပ်မတော် စစ်ရုံးချုပ်ဆိုတဲ့ တံဆိပ်တုံးထုထားတဲ့ သတိပေးစာတွေကို တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ ဒုရဲအုပ်တစ်ဦးအပါအဝင် ဘူးသီးတောင်မြို့နယ်ထဲမှာနေထိုင်တဲ့ ဦးစစ်စစ်ဆိုသူနဲ့ ဦးဉာဏ်လင်းဆိုသူတို့ကိုပါပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
อัลบั้มภาพ ဘူးသီးတောင်က ဒုရဲအုပ် အပါအဝင် လူတချို့ကို အေအေက ကျည်ဆန်တစ်တောင့်စီနဲ့အတူ သတိပေးစာပို့